Magdhow la siinayo dadkii diiwanka booliiska Skåne ku jirey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kadja shaj ditchol kana les attveto khatar e politzia te san ando "Romaregistro"
Magdhow la siinayo dadkii diiwanka booliiska Skåne ku jirey
La daabacay torsdag 13 februari 2014 kl 15.34
Ku dhawaad 400 oo qof ayaa la xiriirtey heyadda amniga iyo karaamo dhowrka (SIN) si ay u ogaadaan bal in ay ku jiraan diiwaanka sharci-darada ah ee Booliiska gobolka Skåne uu ku sameeyey qoomiyada Romerka. Maanta heyadda SIN ayaa go’aamisey in ay kontomeeyo magac u gudbiso wakiilka dowladda ee sharciga Justitiekanslern kuwaas oo markii ugu horeysey dalbanaya in laga siiyo magdhow diiwanka sharci darada ahaa ee lagu sameeyey. Sigurd Heuman waa godoomiya heyadda SIN.
- Kulan aan yeelan doono ayaa ku go’aanmin doonaa in aan dhowr dalabyo magdhow oo na soogaarey u gudbino wakiilka dowladda ee sharciga. Ayuu yeri.
Heyadda ayaa maanta u gudbin doontaa wakiilka shariciyada illa 50meeyo dalbyo magdhow oo la soo gaarsiiyey.
Wakiilka sharciga dowladda ayaa go’aanka ugu danbeeya ka gaari doono in dadka lagu darey diiwaanka sharci-darada ahaa booliiska Skåne ku sameeyey 500 oo ruux ah dhamaantood ahaa goomiyada romerka, in ay xaq u leeyahiin in la siiyo magdhow iyo in kale. Illaa hadda heyadda tiro yar baa soo gaarsiisey laakiin waxaa la filayaa in dad badan oo kale oo magdhow dalbanaya
ay sidoo kale heyadda dalabyadooda u soo gudbin doonaan. Laakiin in ay ku qaadan doonto wakiilka dowladda ee sharciga gudogelida dalabyada ayeysan ogeyn Anna Skarhed oo ah wakiilka sharciga.
- Waxaa laga yaabaa in aan yaro tartiibsano si waxqabadka u noqdo mid amni-sharci ku dhisan, oo dadka loola dhaqmo si iskumid ah. Waxaan fileynaa in ugu badnaan qaadato dhowr bilood ayey tiri Anna Skarhed wakiilka dowladda ee shariciga.
Waxey aheyd bishii september sannadkii tagey markii wargeyska DN fashiley in booliiska Skåne ay diiwaangeliyeen 5000 ruux oo katirsan qoomiyada romerka. Diwaankaas oo ay ku jireen caruur da’dood ka hooseysey labo sanno jir iyo dad waa hore geeriyoodey. Baaritaan heyada SIN ku sameysey diiwankan ayey ku tilmaamtey in uu yahay sharci daro, sidaas daraadeed ayey hadda dadkii ku jirey diiwanka Booliska u dalbanayaan in la siiyo magdhow.